MUQDISHO, Soomaaliya - Saaxiibada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa si wadajir ah usoo dhaweeyay mideynta maamullada Ahlu Sunna iyo Galmudug, oo shalay lagu mideeyay munaasabad ka dhacday Dhuusamareeb.
War Saxaafadeed ay soo saareen QM, Midowga Africa, EU, IGAD, Djibouti, Ethiopia, Italy, Kenya, Netherland, Norway, Sweden, Turkey, Uganda, UK iyo Mareykanka ayaa lagu bogaadiyay dhamaystirka Heshiiska labada maamul.
Waxay ugu hambalyeeyay Madaxda Galmudug iyo Ahlu Sunna tallaabada ay u qaadeen dhanka dib u heshiisiinta iyo mideynta labada maamul taasi oo soo afjartay kala qeybsanaantii gobollada dhexe.
Beesha caalamka ayaa ugu baaqday Madaxweyne Axmed Ducaalle Geelle iyo Sheekh Maxamed Shaakir inay hergeliyaan Heshiiska awood-qeybsiga ah, oo dhigaya in la sameeyo Baarlamaan wadajir ah, Dastuur iyo ciidamo labada dhinac ka kooban, oo difaaca amniga shacabka iyo ku dhaqanka sharciga.
War Saxaafadeedka ayaa lagu booriyay dowladda Federaalka Soomaaliya inay sii wado taageeradeeda si loo hergeliyo heshiiska Galmudug, kaasi oo u nugul inuu jabo, hadii laga weecdo habraaca qodobadiisa.
Urur goboleedka IGAD ayaa looga mahadceliyay kaalinta uu ka qaatey wadahadalladii Ahlu Sunna iyo Galmudug ee ka kala dhacay Nairobi iyo Jabuuti, kuwaasi oo noqday miro-dhal Heshiis lagu gaarey.
Madaxda sare ee maamulka Galmudug ayaa isku khilaafsan Heshiiskii awood-qeybsiga Jabuuti...